Imithi nguPitbull (equka uKesha) - Izinto Zobugcisa
Imithi nguPitbull (equka uKesha)
Le ngoma iquka i-Pitca's RCA labelmate Kesha. Aba babini ngaphambili babesebenzisana nommemezeli Ukuvuka kwakhona ingoma ye-albhamu 'Amantombazana' kunye ne-remix ye 'TiK ToK' yenkwenkwezi engatshatanga 'Crazy Kids.'
Malunga nekota yale ngoma inikezelwe kuKesha 'Whoo Whoo'-ing. Ukuba sikuthathela ingqalelo oku njengokuqhekeka kwezwi, nantsi indlela eyakhiwe ngayo ingoma:
Ukuphuka kweVocal 1 (Kesha): 15
Ikholeji 1 (Kesha): 15
Ivesi 1 (Pitbull) :: 15
I-Pre-Chorus 1 (I-Pitbull-'Swling iqabane lakho ujikeleze kwaye ujikeleze ... '): 15
Ikhoyasi 2 (Kesha): 30
Ukuphuka kweVocal 2 (Kesha): 15
Ivesi 2 (Pitbull) :: 15
I-Pre-Chorus 2 (Pitbull): 15
Ikwayala 3 (Kesha): 30
Imizuzwana engama-30 edlulileyo okanye ngaphezulu ikhefu lezwi, kunye noKesha esenza uninzi lwezandi ngelixa uPitbull ejoba 'iTimber' amaxesha ngamaxesha.
Ke uKesha uwuthwele ngenene umthwalo apha, malunga ne-2: 15 yengoma enikelwe kwizwi lakhe (ngokufanelekileyo, ufumana uninzi lwexesha lokujonga ividiyo). I-Pitbull ibonisa malunga nomzuzu. Xa edlala ingoma ekhonsathini, uPitbull wayehlala edlala ividiyo kaKesha esenza iindawo zakhe.
Iqela lababhali beengoma nabavelisi basebenze kule ngoma, nabasibhozo bafumana iikhredithi zokubhalwa kwengoma kunye nezinye ezongezwe kamva. Masizame ukuzilungisa:
Abavelisi: UGqr Luke kunye nomlingane wakhe rhoqo uCirkut, kunye nomvelisi oliNgesi uSermstyle. Baye bafumana iikhredithi zokubhala ingoma.
Ababhali: UKesha, umama wakhe uPebe (obhale iingoma ezininzi kunye nentombi yakhe), Pitbull, Priscilla Renea, Breyan Isaac.
Malunga neli xesha, uninzi lweengoma ezibethwayo zabhalwa yikomiti, kodwa ayingabo bonke: UFarrell Williams wabhala eyedwa 'Wonwabile'.
U-Pitbull uxelele uRyan Seacrest ukuba ukusetyenziswa kweharmonica kwingoma kukhuthazwe ngu-Avicii's hit single ' Ndivuse . ' Wachaza: 'Ndijikeleze umhlaba wonke kwaye yayiyirekhodi evela eAvicii eyayinkulu kakhulu kwaye eli lizwe laziva kuyo. Le rekhodi yehla yaveliswa nguGqirha Luke, uCirkut kunye neSermstyle, kwaye ndathi, 'Ndoda kufuneka ndibeke izandla zam kuloo nto'. Kwaye ngokuba kukhenketho noKesha, sayichitha, kwaye yintoni engcono kunokuba nenenekazi eligeza, elinomtsalane, elipholileyo, elihle kuyo? '
I-harmonica inika le ngoma indawo yokudanisa isikwere selizwe, egxininiswa kwi-chorus yangaphambi kwexesha, xa uPitbull esenza eyahlukileyo kwiminxeba yomdaniso wesikwere. Ngokwesiko, ezi fowuni zihamba ngoluhlobo:
Jiwuzisa iqabane lakho ngeenxa zonke
Jika ikona yakho ijonge ezantsi
Yazisa iqabane lakho ngeenxa zonke
U-Pitbull wongeza ubuqaqawuli bakhe:
Ukuphela kobusuku, kuya ezantsi
Omnye udubulo, omnye ujikeleze
Abagawuli bemithi bayangxola 'ngamaplanga' xa begawula umthi. Isihloko sinika ingoma i-rustic vibe kwaye yenze umdlalo kwibinzana elithi 'iya ezantsi' - siyazi ukuba uPitbull akazukusebenza ehlathini nanini na, yiyo loo nto iba sisikweko esikhulu sepati.
Le yintsimbi yesithathu yase-UK # 1 yabetha uPitbull noKesha. I-rapper yafikelela kule ngqungquthela kabini ngo-2011, ngokusika kwayo, 'Ndinike Yonke into (ngokuhlwanje)' kwaye njengomculi obalaseleyo kuJennifer Lopez ' Phantsi . ' U-Kesha wabetha kwindawo ephezulu no-Flo Rida ngo-2009 ngo ' Ukujikeleza ngokuchanekileyo 'kwaye kwakhona ngo-2011 kunye' nathi R Ngubani thina R. '
Xa uPibbull eqhekeza:
Jongana phantsi, ukuphanga phezulu
Nantso indlela esithanda uku ...
Olu lulungelelwaniso lwengoma edumileyo emdaka nge-2 Live Crew (kwingoma yabo ethi 'Face Down Ass Up') ebancedileyo ukubafaka kwingxabano yamazwi engoma angamanyala.
URihanna wayengukhetho lokuqala lukaPitbull ukuvela kwingoma, kodwa wayengafumaneki njengoko wayesebenza no-Shakira kwimvumi yaseColombia ethi 'Awukhumbuli Ukulibala'.
Le yayiyeyesibini kwitshathi yaseMelika kaPitbull, owafika ngaphambili # 1 ngo 'Ndiphe Yonke into (ngokuhlwanje)' ngo-2011. UKesha wayefikelele kwingqungquthela ye-Hot 100 amatyeli amabini ngaphambili, ngo-'TIK TOK 'no' We R Who We R , zombini ngo-2010.
Ividiyo yaxhaswa nguDavid Rousseau, umlawuli osekwe eMiami oye wasebenza nakwiziqwengana zikaChristina Aguilera noShakira. UKesha noPitbull abaze babe kwiscreen kunye: izigcawu zakhe zenzeka kwisaloon, elunxwemeni. Kukwakho needonki.
I-Twerking yayinkulu ngeli xesha, kwaye uMiley Cyrus wayeyeyona twerker yaziwayo. UPitbull ubhekisa kuye kumgca:
Ndifana noMiley Cyrus, ndinxibe iimpahla
Twerkin 'kwiibrasi zabo kunye neentsontelo
Ababhali beengoma uLee Oskar, uKeri Oskar, kunye noGreg Errico bafaka ityala lokophula umthetho ngoJuni ka-2014 ngokuchasene nabenzi be 'Timber,' besithi libonisa umculo weharmonica ofana nalowo wawusetyenziswa kwingoma ka-Lee Oskar ka-1978 ethi 'San Francisco Bay.' Umthetho ubanga ukuba ngelixa irekhodi yokurekhoda ifumene imvume yokusebenzisa isampulu kumnini welayisensi, ayiphumelelanga ukufumana imvume kubabhali beengoma ngokwabo.
U-Oskar waziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe neqela leMfazwe.
Ingoma yayidume ngokumangalisayo eCanada, apho yahlala kwi # 1 iiveki ezisibhozo.
Abanye basive kakubi isihloko esithi 'Tinder,' njengakwinkqubo yokuthandana.
mna nawe mntwana akusiyo into kodwa izilwanyana ezincelisayo
andifuni ukubaleka kodwa andinako ukuyithatha
livin la vida loca umhla wokukhutshwa
usuku oluhlaza ndiyathemba ukuba ubunexesha